TALOOYIN KU SAABSAN BEERITAANKA IYO BEERITAANKA KRASULIA ISTEROBERI - KU'SAABSAN
"Krasulya" waa noocyo kala duwan oo xagaaga ah, caan ah oo loo jecel yahay beeralayda dhadhanka miraha iyo aan qabyo ahayn beerashada.
Thanks to hardiness jiilaalka, pear waxaa laga abuuri karaa gobollada leh jawi qabow.
Taariikhda noocyada taranta ee isteroberi "Krasul"
Kiimikada "Krasulya" - wax soo saarka shaqada taranta ee aqoonyahanka Machadka Cilmi-baarista Cilmi-baarista ee Koonfurta Ural ee Beeraha iyo Beeraha, Chelyabinsk. E. A. Falkenberg waxay kala soocday noocyo kala duwan oo ah isku dhafanaanta noocyo "Late" iyo "Little Joy".
Sanadkii 1987, noocyada kala duwan waxay qaateen meel qumman oo ka mid ah noocyada farsamada ee isteroberi. Noocyada Beeraha waxaa inta badan laga helaa gobolka Ural ee beerista warshadaha iyo goobo gaar ah.
Noocyo kala duwan oo jajab ah "Krasulya"
Kiimikada "Krasulia" ee sharaxaadda noocyada kala duwan ee nooca fruiting waxaa loola jeedaa nooc isku dhafan: miraha waxaa lagu sameeyaa kolchatka fudud oo adag, caleemaha gaaban, mararka qaarkood geedo midho leh caleemaha sannadkii hore.
Geedku waa mid dhexdhexaad ah, dhererka geedaha qaangaarka ah wuxuu gaaraa afar mitir. Jirku wuxuu koraa koonfura, wax yar oo cidhiidhi ah, jilifku waa cagaaran, adadag. Crohn waxay ku wareegsantay, kobcinta iyo jeexjeexday.
Laamuhu way toosan yihiin, oo leh jilicis fudud, midab cagaaran oo bunni ah. Caleenta ma ahan mid weyn, caleemaha caleen ayaa wareegsan, cagaar dhalaalaya, oo leh xidigo badan. Caleemaha cirridka leh waxaa lagu hayaa qoyaan badan. Pear Bloom dhamaadka May. Ubaxyo waaweyn oo waaweyn waxay leeyihiin ur wacan, ubaxyada ku jira foomka baaquli, oo leh xayawaanka ovalaha. Wixii pear Krasulia, pollinators ugu fiican waa Rainbow, Northerner.
Midhaha pear ma aha mid weyn, ilaa 120 garaam, qaabka u eg bergamot. Miro ayaa leh jilic jilicsan oo leh dhalaalayo, xilliga bakeeriga pear waa cagaar leh cirridka yar ee dhinaca dhinaceeda, u jeestay xagga qorraxda.
Hubi noocyada kala duwan ee isteroberi sida "Elena", "Just Maria", "Forest Beauty", "Muscovite", "Talgar Beauty", "Favorite Yakovleva", "Veles", "Nika".
Marka pear uu noqdo jaale hurdi ah iyo dhuxusha caarada badankeeda, waa diyaar u ah isticmaalka. Midhaha ayaa leh hilib midab leh oo midab leh, mid yar oo saliid ah, dabacsan oo casiir leh. Pear waa cajiib ah oo macaan, ka tago barkad jilicsan. Miraha waxay u bislaadaan tobanka sano ee hore ee bisha Agoosto.
Faa'iidooyinka iyo noocyada qasabka ah ee pear "Krasul
Hardiness jiilaalka sare ee pear "Krasulya" - faa'iidadiisa ugu weyn. Wax yar oo muhiim ah waa difaac wanaagsan ee cudurada fangaska dabiiciga ah iyo dhibaatooyinka cayayaanka: inta lagu guda jiro sannadaha beerista ee kala duwan, ma aha kiis kiniin ah, gubasho bakteeriyo iyo caarada caarada ayaa la arkay.
Kala duwanaanta dhoobada waxaa lagu gartaa fruiting si dhakhso ah, sanadka afaraad ka dib markii la beero, geedaha ka soo baxa goosashada. Waxsoosaarka Krasuli Krasuli sidoo kale waa mid sare - ilaa 40 kg qof kasta oo weyn (10 sano) geedka.
Dhibaatooyinka kala duwan ee kala duwan waxaa ka mid ah cabbirka yar ee miro, dhirta lafaha, taas oo ka dhigaysa midho goosan, iyo suurtogalnimada tartanka dhadhanka miro xilliga qaboobaha. Miisaaniyad xoog leh ma aha kaydinta muddada dheer: isteroberi ayaa lagu kaydiyaa qaboojiyaha muddo aan ka badnayn laba toddobaad.
Kala duwan waxaa badanaa loo isticmaalaa cusbo, oo loo warshadeeyey casiir ama qasacadaysan xilliga jiilaalka.
Qaababka beeritaanka geedo geedo ah "Krasuli"
Doorashada geedo beeritaanka, fiiro gaar ah u nidaamka xididka geedka. Waa in la sameeyaa, caleemaha xooggan oo aan lahayn farsamo.
Ma taqaanaa? The pear waa qaraabo dhow ee Rose, sida ay u matalayso qoyska of Rosaceae. Qaraabada ugu dhow ee pear waa tufaax, hawo iyo ilaa laba kun oo dhir.
Goorma ayay ka fiican tahay in la beero?
Kalluunka beerta "Krasuli" ayaa la qabtaa bisha Abriil, ka dib marka uu barafku soo noqdo. Beeraha xilliga guga waxaa laga doorbidi karaa gobollada qaboobaha qaboobaha. Xaaladaha kulul ee cimilada ah, waqtiga ugu deg dega ah waa dhammaadka Sebtembar. Ka hor inta jiilaalka, dhirta waxay leeyihiin waqti si aad u hesho xoog iyo xidid.
Sida loo doorto meel dhul ah
Natiijada beerashada iyo daryeelka dheeriga ah ee loo yaqaan 'Krasulia pear' waxay ku xirnaan doontaa meesha loo doortay shinnida. Goobta dhirta waa inay noqotaa mid siman, iftiin leh oo laga ilaaliyo dabaylaha xooggan.
Waa muhiim! The pear ma u dulqaadan transplants, nidaamka xididka si fiican u ma qaadan xididka, sidaas darteed si dhakhso ah u beeri in meel joogto ah.
Socdaalka biyaha waa inuu ahaadaa mid qoto dheer. Haddii aad qorsheyneyso in aad ku beerato dhirta meel u dhow guriga ama dib-u-dhiska, dib uga gurashada dhismaha ugu yaraan saddex mitir. Ciidda for pear waa dabacsan, nafaqo leh oo la miiray.
Sida loo diyaariyo meel iyo dhirta sapling
Ceelka dhulka ee pear waa la qodayaa ballaciisu yahay 70-80 cm, qoto dheer oo ah 70 cm, fogaan ah shan mitir ayaa la sameeyey dhirta. Wixii geedo u baahan yihiin si ay u diyaariyaan dhulka. Si tan loo sameeyo, qaado saddex baaldiyo ah compost, baaldi ciid iyo burka dolomite, 500 ml oo ah chloride potassium iyo superphosphate, oo ku saabsan litir oo ash ah.
Ku qas maadooyinkaan leh lakabka dhulka qoday godka. Qeybta hoose ee ceelka u jiifay substrate buurta, si tartiib ah toosan oo xididdada on top - seedling. Marka xigta, xididdadu waxay ku dhacaan ciidda jiifka, tamping.
Qalabka aasaasiga ah ee dhirta ayaa weli ah shan sintimitir kor ka sarreeya dhulka. Ka dib markii laga beerto, abuurka ayaa si badan u waraabiyey. Sidee loo daryeeli karaa geedo cows ah oo Krasulia ah? Wuxuu u baahan yahay waraabinta. Si loo fududeeyo geeddi-socodka waraabka agagaarka geedka, waxaa lagula talinayaa inaad sameysid jeexdin. Ka dib markii laga beerto, seedling wuxuu u baahan yahay taageero, ku xir xargaha, iyo wareegga foosto waa mulched.
Xiiso leh In dabeecadda maanta waxaa jira in ka badan saddex kun nooc oo isteroberi. Dhirta dhulalka waxaa lagu magacaabaa Aasiya, iyo Yurub. Koofurta Yurub waxaa laga yaqaan 1000kii BC. Pearl Asian waxaa lagu beeray dalka Shiinaha laga bilaabo 1134 BC.
Isku-dhafka daryeelka ee loo yaqaan 'pear Krasulia'
Marka koraan cayayaanka Krasuli, si ay u siiyaan qoyaan iyo nafaqo ku filan, waxaa lagula talinayaa in ay ciidda ku jira dogob geedka hoostiisa hoostiisa. Way fiicnaan lahayd in la beero inta u dhaxaysa safarka dhirta - siderats.
Geedku wuxuu u baahan yahay waraabin badan, laakiin marar badan ma ahan. Waraabinta ku xiran cimilada waxaa la sameeyaa 2 - 4 goor bishii. Ku daadi ilaa saddex baaldi halkii mitir labajibbaaran ee wareegga garabka.
Digniin! Waxaa lagama maarmaan ah in biyaha marka la waraabiyo pear "Krasuli" gashay 60-80 cm qoto dheer.
Ka dib markii la waraabiyo, ciidda waa in la furfuro, sidaa daraadeed biyaha ayaa si dhakhso ah u nuugay oo waxaa jira helitaan hawo si xididada. Wareegga wareega wareegga ayaa sidoo kale looga baahan yahay, kan weyn ee teedha geedka, ballaaran ballaaran ee ciidda in la nadiifiyo. Ka dib markii la waraabiyo, ciidda waxaa la mulched leh peat ah ilaalinta fiican ee qoyaanka.
Goorta iyo waxa ay ku habboon tahay in la sameeyo dharka sare
For pears bacriminta iyo isticmaalka organic, iyo Bacriminta macdanta. Cagaarka bakeeriga ama compost waxaa la isticmaalaa saddexdii sanoba mar. Xeryaha nidrogenka waxaa lagu quudiyaa sanad walba inta lagu jiro xilli firfircoon. Xilliga xagaaga, bilowga iyo dhexda, waxay bacrimiyaan qashin iyo Bacriminta fosfateerka.
Waa muhiim! Quudinta koowaad waxaa la fuliyaa sanadka labaad ee nolosha geedka.
Kiimikada "Krasuli" waxay u baahan tahay in ay ogaato sida loo xoojiyo. Manjada ugu horeysay waxaa loo fuliyaa isla markiiba ka dib markii laga beerto seedling, caleemaha waxaa la gooyaa saddex meelood meel oo dherer ah si ay u kiciyaan branching. Warshad 2-sano jir ah, caleemo ayaa la gaabin, taas oo koritaankeeda ay ka hortagtaa bartamaha mid ka mid ah saddex-meelood laba, inta kale ee caleemaha ma aha hal saddexaad oo dherer ah. Marka xigta, samee hababka caafi-dhowrka: ka saar burbur, jaban, daciif ah oo qallalan. Ka dib markii la jarjarey aagga laga gooyo, waa lagama maarmaan in la saliido beerta beerta.
Noocyo isdabamarin ah.
Hadafyada looga hortago, pear "Krasuli" ee dalka guga waxaa lagu daaweeyaa baaruud kolloid ah. Nidaamka waxaa la sameeyaa labo jeer labo asbuuc. Xaaladaha cudurada, guuldarada xooggan ee geedka waxaa lagu buufiyaa kiimikooyinka: Vitaros, Bayleton, Topaz, Previkur. Qaybaha bukaanka ee geedka ayaa la jaraa oo gubay.
Sidoo kale, ka dib goosashada, waxaad ku buufin karaa geed Bordeaux ah. Cayayaanka ku'saabsan ayaa la dagaalamaya sunta cayayaanka. Daawooyinka dadku waxay sidoo kale ka caawiyaan ka hortagga cayayaanka: faleebo tufaax ah, faleebo marigolds iyo toon.
Sida loo diyaariyo qabowga qaboobaha
Dhirta kulul ee dhalinyarada ah waxay qaboojin karaan qabow daran xilliga jiilaalka. Wareegga Pristvolny waa in lagu daraa lakabka lakabka dhulka oo daboolaya waxyaabo gaar ah. Haddii aad ku daboolatid lapnik mulch - waxa kale oo uu ka ilaalin doonaa jilifaha jilicsan ee jiirka.
Cayayaanka Krasulya waa mid miro dhal ah, ma ahan mid madaxbannaan oo daryeel iyo kala duwanaansho u dhaxeysa, oo ah kirayste suurad wacan oo beertii kasta. Waxaa laga yaabaa inay qaadato dadaal badan si ay u koraan, laakiin goosashada dhadhan fiican leh iyo mid caafimaad leh waxay ka badaneysaa bixinta dadaalkaaga.